आले जनताको मनमनमा बस्ने संकेत, फेरि देखाए अर्को धमाका ! – GALAXY
आले जनताको मनमनमा बस्ने संकेत, फेरि देखाए अर्को धमाका !
पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको पछिल्लो कामले चर्चा पाउन थालेको छ । उनले ब्याक टु ब्याक जनताको मन जित्ने काम गर्न थालेका हुन् । र्‍यापीड पीसीआरका लागि नमुना दिनेहरु र रिपोर्ट लिनेहरुको भद्रगोल भीडमा प्रहरीलाई जानकारी नदिई केही संचारकर्मीसहित छड्केमा पुगेका थिए ।
मन्त्री गाडीबाट ओर्लिनेबित्तिकै र्‍यापीड पीसीआर गरिसकेका दुई जना युवाको हातबाट बिल लिन्छन् । ‘कति तिर्नुभयो रु’ ती युवाहरुले मन्त्रीलाई भन्छन् ‘दुई हजार रुपैयाँ ’ पार्किङको अर्को ठाउँमा अर्को समूहलाई उनी सोध्छन् । उनीहरुले पनि पर्यटनमन्त्री आलेलाई ‘दुई हजार रुपैयाँ तिर्‍यौं । पीसीआर गराउन साहै कष्ट र महँगो भयो’ भन्छन् ।
त्यही भिडबाट रुकुमका झुपकुमार मल्लले मन्त्री छड्केमा आएको थाहा पाएपछि गुनासो राखे । ‘कसैले यता भन्छ, कसैले उता भन्छ । सर हामीलाई यहाँ लुट्ने काम भइरहेको छ । दुख पाइयो,’ यात्रुहरुका कुरा सुनेपछि आलेले भने, ‘मैले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुबाट धेरै गुनासो सुनेर आएको हुँ । बाहिर १ हजारदेखि १२ सयमा हुने काम यहाँ २ हजारमा हुनु भनेको ठगी हो । म यसलाई समाधान गर्छु ।’
५ दिनअघि मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका राजकुमार क्षत्रीलाई पनि साथै लिई पुगेका उनले यात्रुहरुलाई देखाउँदै र उनीहरुकै बीचमा त्यहाँका ल्याबहरुको मूल्य अनुगमन गरी तत्काल ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए । ‘डीजी’साप पीसीआरमा भइरहेको लुट तुरुन्त बन्द गराउनुहोस् । आइतबारबाट १ हजारदेखि १२ सय रुपैयाँ कायम गराउनुहोस् । जुन ल्याबले मान्दैन कारबाही गर्नुहोस् ।’
क्षत्रीले मन्त्रीको निर्देशनअनुसार आइतबारदेखि ल्याबमा भइरहेको जाचको अनुगमन गरी मूल्य घटाउने बताए । उनले विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीलाई आइतबार नयाँ मूल्य लागू गर्न पत्र पठाउने बताए । हाल काठमाडौंबाट दुबईका लागि हुने उडानमा नेपाली तथा विदेशी वायुसेवाहरुले उड्नुभन्दा २ देखि ६ घन्टाअघिसम्मको आरटी–पीसीआर जाँच गरेको रिपोर्ट अनिवार्य माग्छन् ।
त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले हङकङको उडानमा ६ घन्टा अगावैको आरटी–पीसीआर नेगेटिभ अनिवार्य गरेको छ । कोरोना संक्रमण कायमै रहेकाले विभिन्‍न मुलुकहरुले कोरोना जाँच र खोप लगाएको प्रमाणलाई यात्रामा अनिवार्य गरेका छन् ।
विमानस्थलमा नियमन नहुँदा प्रयोगशालाहरुले महँगो शुल्क लिई परीक्षण गर्दै आएका छन् । आले यसअघि कात्तिक १ गते नेपाल वायु सेवा निगमले ७ जना यात्रुलाई भोजपुरको उडानमा छुटाउँदा आन्तरिक विमानस्थलको निरीक्षणमा पुगेका थिए ।